१०८ औं भड्छा महोत्सव सोमबार राती उद्घाटन हुने-Nagarikaawaj.com
१०८ औं भड्छा महोत्सव सोमबार राती उद्घाटन हुने
आइतवार, पुस ३०, २०७४
नागरिक आवाज/सैनामैना , ३० पौष
रातीमा सुरु भएर रातीमा लाग्ने अनि बिहान हुन नपाउदै सकिने ऐतिहासिक १०८ औं भड्छा महोत्सव तथा माघे औंसी मेला माघ १ गते सोमबारदेखि ५ गते सम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।
रुपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिकामा वडा नं. ८ मा भड्छा गाउँ समाजको आयोजनामा सोमबार राती ८ बजे मेलाको उद्घाटन हुने आईबार आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिएको हो । सोमबार दिउसो मध्यान्न १२ बजे झाँकी सहित रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं. ५ का प्रतिनिधिसभा का सभासद भरत कुमार शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रमको उद्घाटन हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
१०८ वर्ष पहिलादेखि नै भड्छा महोत्सव रातीमा लाग्ने गरेको र उज्यालो नहँुदै समापन हुने गरेको यँहाका स्थानीयहरुले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । यो वर्ष आयोजना गर्न लागिएको भड्छा महोत्सव १०८ औं पटक हो ।
प्रत्येक वर्ष माघे औंसीको दिनमा सुरु हुने मेला यो वर्ष भने माघ १ गतेबाट सुरु हुँदै छ । माघे औंसीको दिनमा सुरु हुने भएकाले यसको धार्मिक , ऐतिहासिक , सांस्कृतिक महत्व भड्छा मेलाको रहेको स्थानीयबुद्धिजिवी बुद्धिराम चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् ।
यो महोत्वस अरु महोत्सव भन्दा फरक छ । किनभने रातीमा सुरु भएर रातीमा नै सकिने महोत्सव हो । भड्छा मेलाको सुरुवातको बारेमा चौधरीले पत्रकार सम्मेनमा भने– “भड्छा गाउँ भन्दा माथि साधुको कुटी थियो ।
त्यही साधुबाट मेलाको सुरुवात भएको पहिलेका बुढापाकाहरुले सुनाउने गरेको उनले सुनाए । माघे औंसीको दिनमा गोरावल तपमा मेला सुरु भएको हो ”। विस्तारै स्वतः स्फुर्त रुपमा रुपन्देही जिल्ला लगायत छिमेकी जिल्ला कपिलबस्तु , नवलपरासी , पाल्पा , अर्घाखाचीबाट नाच गान लिएर यस ठाउँमा आउने थालेको स्थानीय चौधरीले सुनाए । पहिले दिउसोमासबै काममा ब्यस्त हुने भएकाले रातीको समयमा मेला लागेको हुन सक्ने उनको भनाई छ । त्यही चलनलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएर साँझमा मात्र महोत्सवको मुल समाराहे सुरुवात हुने गरेका स्थानीयहरुले बताइका छन् ।
अहिले मेलाको औपचारिक रुपमा मनाउन लागेको १०८ वर्ष पुगेको अर्का स्थानीय राम बहादुर चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । प्रत्येक वर्ष स्थानीयहरुको घरबाट आफै केही पैसा जम्मा गरेरे मेला सञ्चालन गरिएपनि अहिले नगरपालिकाले रु ३ लाख बजेट छुट्टाएपछि मेला आयोजना गर्न सजिलो भएको उनले सुनाए ।
प्रत्येक वर्ष भड्छा गाउँ समाजको आयोजनामा सञ्चालन हुने महोत्सवमा थारुहरुका सांस्कृतिक पहिरन , झाँकी , नृत्य , खानाका परिकारहरु रहने गरेका छन । मेला सञ्चालन गरेको १०० वर्ष पुरा भएपछि “हाम्रो संस्कृती, हाम्रो पहिचान, शिक्षा, खेलकुद, जगेर्ना गर्ने हाम्रो अभियान भन्ने मुल नारा लिएर मेलालाई भने आधुनिकता सँगै जोडेर सञ्चालन गरिएको आयोजकले बताएको छ ।
मेला अहिले भने औपचारीक कार्यक्रम सहित ५ दिन सम्म सञ्चालन हुने गरेको छ । यस वर्ष भड्छा आईडल, बृहत, स्वस्थ्य शिविसर , भलिबल प्रतियोगिता , रक्तदान , हण्डी फोर , भाले छोप्ने , हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता , कुर्ची दौड , आमा नृत्य प्रतियोगिता , लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरिएको महोत्सव मुल आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ८ का कार्यबाहक अध्यक्ष ईश्वरी भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
मेलालाई परम्परागत कायम गर्दै आधुनिकता जोड्दै गएको उनले बताएका छन् । थारुहरुको कला , संस्कृती , रहन ,सहन , भाषा , खानाको परिकार लगायत अन्य जातजाती भाषा भाषीको समेत कला संस्कृती महोत्सवमा देख्न पाईने प्रचार प्रसार संयोजक ललित पाण्डेयले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् ।
यस क्षेत्र कृषि भुमि भएकाले यस क्षेत्रमा कृषिबाट उत्पादन भएका बस्तुहरु समेत प्रर्दशनको लागि कृषिको स्टल समेत रहने बताईएको छ ।